လန်ဒန် တွင် အမျိုးမျိုးသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမျိုးမျိုးသော လူများ ရှိကြသည်။ မဟာ လန်ဒန် ဒေသ အတွင်း ဘာသာစကား ၃၀၀ ကျော်ကို ပြောဆိုလျက် ရှိကြသည်။ မဟာ လန်ဒန် အာဏာပိုင် အဖွဲ့၏ ခန့်မှန်းချက် အရ ၂၀၁၅ တွင် လူဦးရေ ၈.၆၃ သန်းခန့် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ဥရောဂ သမ္မဂ္ဂ အတွင်း လူဦးရေ အားဖြင့် အများဆုံး စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ် ဖြစ်သည်။ ယူကေ တစ်ခုလုံး လူဦးရေ၏ ၁၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်မြို့ပြ ဒေသသည် ပဲရစ်မြို့ ပြီးလျှင် ဥရောပ သမ္မဂ္ဂ အတွင်း ဒုတိယမြောက် လူဦးရေ အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်းအရ ၉.၇ သန်းကျော် ဖြစ်သည်။ လန်ဒန် မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသသည် ဥရောပတွင် လူဦးရေ အများဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး နေထိုင်သူ ၁၃,၈၇၉,၇၅၇ မျှ ရှိသည်။ မဟာလန်ဒန် အာဏာပိုင် အဖွဲ့ကမူ မြို့တော် ဒေသ အတွင်း (အင်္ဂလန် နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၏ ဒေသ အတော်များများ အပါအဝင် လူဦးရေ ၂၂.၇ သန်းမျှ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ လန်ဒန် သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အများဆုံး မြို့အဖြစ် ၁၈၃၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၂၅ အထိ တည်ရှိခဲ့သည်။
တူးဒေါခေတ်အတွင်းတွင် ပြုပြင်‌ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ပရိုတက်စတင့် ဝါဒဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး လန်ဒန်ရှိ အိမ်ခြံမြေအများစုကို ဘုရားကျောင်းတော်မှ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် မြို့တော်အတွင်း ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး အရှိန်မြင့်လာခဲ့သည်။ ၁၄၇၅ တွင် ဟန်းဆေတစ်အဖွဲ့မှ အင်္ဂလန်၏ ပင်မ ကုန်သွယ်ရေး အခြေစိုက်စခန်းကို လန်ဒန်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စတားဟော့ဖ် အော့ဖ် စတီးလ်ယတ်ဒ် ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအခြေစိုက် စခန်းသည် ၁၈၅၃ ခုနှစ်အထိ တည်ရှိခဲ့ပြီး ဟန်းဆေတစ်မြို့တော်များ ဖြစ်သော လူးဘက်၊ ဘရီမန် နှင့် ဟမ်းဘတ်တို့မှ အရှေ့တောင်ပိုင်း ရထားကုမ္ပဏီအား ရောင်းချ လိုက်ချိန်အထိ ဖြစ်သည်။ ဆေးမဆိုးရသေးသော သိုးမွှေးအထည်များကို လန်ဒန်မှ အောက်ပိုင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သော နယ်သာလန်၊ ဘယ်လဂျီယမ် နှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ တို့သို့ တင်ပို့ ရောင်းချကြသည်။
၁၆၃၇တွင် ချားလ်(၁)၏ အစိုးရသည် လန်ဒန်ဒေသအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်အရ မြို့တော် ကော်ပိုရေးရှင်းအား မြို့တော်အနီးအနားရှိ တိုးချဲ့လာသောဒေသများကိုပါ ပါဝင်အောင် ထည့်သွင်း၍ နယ်နိမိတ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကို တိုးချဲ့ရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရင်မှ လန်ဒန်၏ လွတ်လပ်မှုကို လျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ထိုတိုးချဲ့ဒေသများကို အုပ်ချုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ မြို့တော်အတွင်းရှိ အသင်းအဖွဲ့များမှ အာဏာကို ခွဲဝေခြင်း မပြုလိုသောကြောင့် လည်းကောင်း ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ "မဟာငြင်းပယ်မှုကြီး"ဟု နောင်တွင်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသော အဆိုပါကိစ္စ လန်ဒန်မြို့၏ သီးသန့်ဖြစ်သော အုပ်ချုပ်ရေး အနေအထား ဖြစ်လာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ် ပြည်တွင်းစစ်တွင် လန်ဒန်မြို့သား အများစုတို့သည် လွှတ်တော်ဘက်မှ ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်။၁၆၄၂ တွင် ဘုရင့်သစ္စာခံတို့၏ ကနဦးအောင်မြင်မှုသည် ဘရန့်ဖို့ဒ်နှင့် တန်း ဟမ်ဂရင်းစစ်ပွဲတို့တွင် ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ လန်ဒန်မြို့အား ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းဟု ခေါ်သော ကာကွယ်ရေးတံတိုင်းဖြင့် ဝန်းရံထားခဲ့သည်။ ထိုကာကွယ်ရေး တံတိုင်းအား လူပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ခန့်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂လမကြာဘဲ ပြီးစီးခဲ့သည်။
↑ Mills၊ David (2001-02-22)။ Dictionary of London Place Names။ Oxford Paperbacks။ ISBN 978-0192801067။ OCLC 45406491။
↑ Global Financial Centres 7။ Z/Yen (2010)။5November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global city GDP rankings 2008–2025။ PricewaterhouseCoopers။ 19 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Chennai asaglobal finance hub??accessdate=18 October 2010"၊ The Financial Express၊ 20 July 2009။ [လင့်ခ်သေ]
↑ "Delta Expects New Slots To Foster Growth At Heathrow Airport"၊ The Wall Street Journal၊ 23 February 2011။7March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 May 2011။
↑ Number of international students in London continues to grow။ Greater London Authority။ 24 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ Denison, Simon (July 1999). "First 'London Bridge' in River Thames at Vauxhall". British Archaeology (46). Retrieved on 15 April 2011. Archived 27 April 2011 at the Wayback Machine.
↑ Perring၊ Dominic (1991)။ Roman London။ London: Routledge။ p. 1။ ISBN 978-0-203-23133-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ The early years of Lundenwic။ The Museum of London။ 10 June 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Schofield၊ John; Vince၊ Alan (2003)။ Medieval Towns: The Archaeology of British Towns in Their European Setting။ Continuum International Publishing Group။ p. 26။ ISBN 978-0-8264-6002-8။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ Robin R. Mundilldate = 2010၊ The King's Jews၊ London: Continuum၊ pp. 88–99၊ ISBN 978-1-84725-186-2
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လန်ဒန်မြို့&oldid=740347" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။